Indasitiri yeOptical - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
Kune yakakwirira-chaiyo zvikamu uye zvikamu, kuyerwa kwedimensional chikamu chakakosha chekuvandudza kunaka kwechigadzirwa kungave mukugadzira kana mukuongororwa kwemhando mushure mekugadzirwa. Kuenzaniswa nedzimwe nzira dzekuongorora mukuyera kuyerwa, kuona muchina kune yakasarudzika tekinoroji zvakanakira:
1. Muchina wekuona hurongwa unogona kuyera hukuru hwakawanda panguva imwe chete, iyo inovandudza kushanda kwebasa rekuyera;
2. Michina yekuona sisitimu inogona kuyera diki diki, ichishandisa magnification lenzi kukudza chinhu chakayerwa, uye kuyerwa kwechiyero kunogona kusvika padanho remicron kana kupfuura;
3. Kuenzaniswa nemamwe magadzirirwo ekuyera, muchina wekuona system kuyerwa kune kuenderera kwakakwirira uye kurongeka, izvo zvinogona kuvandudza chaiyo-nguva uye kurongeka kweyero yeindasitiri yepamhepo kuyerwa, kuvandudza kugadzirwa kwekugadzira, uye kutonga kwechigadzirwa;
4. Muchina wekuona system unogona kuyera otomatiki zviyero zvechigadzirwa, senge contour, aperture, kureba, nzvimbo, nezvimwe;
5. Chiyero chekuona kwemuchina chiyero chisiri chekubatana, icho chisingagoni kungodzivirira kukanganisa kune chinhu chakayerwa, asiwo chinokodzera mamiriro ezvinhu apo chinhu chakayerwa chisingagoni kubatwa, zvakadai sekushisa kwepamusoro, kukwirira kwepamusoro, mvura, nharaunda ine ngozi, nezvimwewo. ;
Nheyo yeVision Measuring System
Chiyero maapplication anoda akapinza contoured mifananidzo. Kune kamera, inoda kukwanisa kupa mhando yekufungidzira iri nani, inoda kuva nemapikseli akakwana kuti ive nechokwadi chekupfura, uye inodawo kuve neiyo yakaderera mwero weruzha rwemufananidzo kuti ive nechokwadi chekuti grey kukosha kweiyo contour edge yakagadzikana. uye akavimbika.
Nekuda kwehukuru hwakasiyana hwebasa uye kuyerwa kwezviyero zvinodiwa, izvo zvinodikanwa zvekugadzirisa kamera zvakawedzera. Kune madiki uye epakati-saizi workpieces ane yakaderera kurongeka zvinodiwa uye kuyera zviyero pane imwecheteyo ndege, imwe kamera inogona kazhinji kuzadzisa zvinodiwa; yehukuru-hukuru, yakakwirira-chaiyo workpieces, uye kuyera zviyero zvisiri mundege imwechete, akawanda makamera anowanzoshandiswa kupfura.
Kusarudzwa kwechivheneko chegadziriro yekuyera chiono kunonyanya kuenderana nekuratidza contour yechinhu chichayerwa. Zviedza zvinowanzoshandiswa mukuyera saizi ndeye backlight, coaxial light uye low-angle light sources, uye parallel light sources zvinodiwawo mumashandisirwo ane kunyanya kukwirira kwechokwadi zvinodiwa.
Maonero ekuyera masisitimu lenzi anowanzo shandisa telecentric lenzi. Iyo telecentric lens yakagadzirirwa kugadzirisa parallax yechinyakare maindasitiri lens, ndiko kuti, mukati mechimwe chinhu chinhambwe renji, iyo yakawanikwa magnification haishanduke. Iyi dhizaini yakakosha kana chinhu chakayerwa chisiri panzvimbo imwechete. Zvichienderana neayo akasarudzika maitiro ekuona: kukwidziridzwa kwepamusoro, kudzika-kwakafara kwemunda, kudzika-kwakaderera kukanganiswa uye dhizaini yemwenje, iyo telecentric lens yave chikamu chakakosha chekuyera kwemuchina kuona.
1. Pfungwa, kukosha uye hunhu hwepamusoro-chaizvo zvikamu kugadzira. Kugadzirwa kwezvikamu zvepamusoro-soro kunobva pane yakakwirira-chaiyo mechanical zvikamu. Iyo yakabatanidzwa dzidziso uye tekinoroji yekombuta gong kugadzirisa inogona kuona iyo organic musanganiswa uye optimization yekudyisa, kugadzirisa, kuyedza, uye kubata zvinoenderana nechimiro uye zvinodiwa zveyakagadziriswa workpiece, uye kupedzisa kugadzirwa kwezvikamu pasi pemamiriro ekugadzirisa.
2. Kuongororwa kwechimiro chekusimudzira kune dzimwe nyika. Tekinoroji yekugadzira michina yemhando yepamusoro inorumbidzwa seimwe yetekinoroji yakakosha muzana ramakore rechi20, uye inokosheswa zvakanyanya nenyika dzepasirese.
3. Tekinoroji yekugadzira michina yenyika yangu yakagadziridzwa zvishoma nezvishoma mukupera kwema1980 uye kutanga kwema1990, uye iindasitiri inokurumidza kusimukira muChina nhasi. Zvigadzirwa zvekugadzira michina yemhando yepamusoro-chaizvo zvinoshandiswa zvakanyanya muminda yemauto neyevanhu senge dziviriro yenyika, kurapwa, ndege, uye zvemagetsi.
4. Kugadziriswa kwe-high-precision mechanical parts kune zvakanakira kukwirira kwepamusoro, kushandiswa kwesimba shoma, kushanduka kwekugadzirwa uye kushanda kwakanyanya. Kuderedza ukuru hwehurongwa hwese hwekugadzira uye zvikamu zvakanyatsorongeka hazvigone kuchengetedza simba chete asiwo kuchengetedza nzvimbo yekugadzira uye zviwanikwa, izvo zvinoenderana nekuchengetedza simba uye zvakatipoteredza-ushamwari kugadzirwa mode. Ndiyo imwe yenzira dzekusimudzira yekugadzira green.
5. Minda yekushandiswa kwepamusoro-soro yezvikamu uye zvikamu Zvikamu zvepamusoro-soro uye zvikamu zvinoshandiswa mumichina yekuona yezvigadzirwa zvakasiyana-siyana-zvesayenzi. MuChina, ivo vanonyanya kushandiswa mune chiridzwa uye chiridzwa indasitiri mune zvesainzi zviridzwa.
6. Kana ichienzaniswa neyakajairwa kugadzirwa kwemichina, kugadzirwa kwemichina yechokwadi kune yakakwira tekinoroji yemukati (dhizaini nekugadzirwa), yakaomesesa yekugadzira michina, yakakwirira yakawedzera kukosha, uye kutengesa kwezvimedu zvidiki.
Chinangwa chepamusoro-chaizvo chemechani chekugadzirisa zvikamu ndechekuziva iyo pfungwa ye "diki muchina maturusi ekugadzirisa zvikamu zvidiki", izvo zvakasiyana nemaitiro ekugadzira uye matekinoroji eakajairwa makina zvikamu. Ichava nzira inobudirira yekugadzirisa ye-high-chaiyo zvikamu zve-non-silicon zvinhu (zvakadai sesimbi, ceramics, nezvimwewo). Iyo inogona kugadzirisa zvakanyanya matambudziko mukugadzirisa nzira dzeiyo chaiyo chiridzwa zvikamu.
Lathe mudziyo wemuchina unonyanya kushandisa chishandiso chinotenderedza kushandura chinotenderera chebasa. Drills, reamers, reamers, matepi, anofa uye knurling maturusi anogona zvakare kushandiswa pane lathe kuenderana kugadzirisa.
1. Yakakura yakaderera-frequency torque uye yakagadzikana kubuda.
3. Iyo torque inoshanduka mhinduro inokurumidza, uye kukurumidza kudzikamisa kurongeka kwakakwira.
4. Decelerate uye mira nokukurumidza.
5. Simba rinopesana nekupindira kwakasimba.